Nampizara ny Malagasy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hatreto dia ny tantaran’ny Malagasy no noresahana. Inona avy ny zavatra nisy niainan’ny vahoaka tao anatin’izay tantara izay, hatramin’ny andron’ny fahampanjaka ka mandraka ankehitriny. Noresahana ihany koa ny mikasika ny fananan-tany. Inona avy ny endrika isehoan’ny fananan-tany. Fantatsika tsara fa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany dia tsy afaka misaraka. Azo lazaina fa nampizarazara ny Malagasy, nampizarazara ny fianakaviana raha ireo lohahevitra roa ireo no jerena, na ny tantara aza dia nanjary nisy izany afovoan-tany sy anindran-tany izany. Samy Kristianina ihany anefa.
Raha ny tanindrazana indray dia tena zava-dehibe amin’ny Malagasy tokoa raha izany tanindrazana izany. Mifamatotra amin’ny tany ny fiainan’ny Malagasy. Raha 10 Ha ny tany tany amin’ny dadabe taloha dia izay no nozarana amin’ireo taranaka dia mihena hatrany araka ny fitombon’ny taranaka. Lasa miteraka lonilony eo amin’ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny Malagasy ny resaka fananan-tany. Tsy natao hampilamina ilay izy fa tena miteraka fikorontanana. Mbola izay hatrany no nolovaintsika ankehitriny.
Manaiky ny ankamaroan’ny Malagasy fa tena kristianina tokoa. Maro an’isa amin’ny Malagasy dia kristianina. Manoloana ny zavatra manahirana dia tsy hita izay mahakristianina izay nefa amin’izay mihitsy no tena tokony ahitana fa kristianina. Manana fanetren-tena, manampy ny hafa, mihaino ny hafa, mifanampy fa tsy tia tena. Araka ny nambaran’Atoa Rabarison Arsène avy ao amin’ny Hfkf dia « avy amin’ireo olana nisy rehetra ireo no nijerena hoe ahoana no hanabeazana ny tanora Malagasy ? » Ny tanora manko no ho tompon’ny rahampitso. Mba ho iray izy rehetra, ny kristianina no tiana ho lazaina eto. Mbola betsaka ireo kristianina no tsy latsaka anaty, sahy mamitaka ny namana eny fa hatramin’ny havana aza. Ny firaisankina no hery, ary ny fihavanana dia zava-dehibe loatra amintsika Malagasy. Izay no maha iray antsika. Tsy tokony hijanona amin’izay anefa isika fa tsara lavitra raha aseho amin’ny asa izany mba hisy vokany eo amin’ny fampandrosoana handehanana makany amin’ny fiadanana.
Raha mihaino ireo ohabolana maro isan-karazany nataon’ireo Ntaolo Malagasy isika dia tena niaina ny sotoavina kristianina izy ireo nefa nolazaina fa tsy kristianina. Ankehitriny anefa lazaina fa kristianina no maro an’isa saingy ny zava-misy dia tsy miaina ny soatoavina kristianina isika, betsaka ny kolikoly, misy ny mamono olona, mifanilika fa tsy mifanampy. Mila mifampidinika sy mandini-tena isika mba hizotra amin’ny lala-marina voajanahary efa namboarina ho antsika hatrany amboalohany. Vokatry ny natontsika izao mampahantra antsika izao. Mila miaiky ny fahadisoana ary manonitra izany amin’ny alalàn’ny fibebahana sy fanarenana ny tsy nety natao.
Filankevitry ny minisitra : Resaka Jirama no nahaliana - il y a 4 jours
Année nouvelle, nouvelle équipe ? : Sur les traces du nouveau PM - il y a 12 jours